Balaa Lolaa Hiwustan: Tiraamp fandii yeroo muddamaa gaafate - BBC News Afaan Oromoo
Balaa Lolaa Hiwustan: Tiraamp fandii yeroo muddamaa gaafate
Goodayyaa suuraa Namootni 300,000 ta'an deeggarsaaf galmaa'anii jiru.
Mootummaan Ameerikaa Naannolee balaa lolaa obomboleettii 'Harikeen Harvii' jedhamuun miidhaman dandamachiisuuf koongiransiin biyattii Fandii yeroo muddamaa akka heeyyamu gaafate.
Pireezidant Tiraamp deeggarsa maalaqaa doolaara biliyoona 5.9 ka'uumsaaf gaafachuuf karoora qabaachuu isaanii 'Asoshiyeetid Pires' gabaaseera.
Bulchaan kutaa biyya Teeksaas Griig Aboot naannichi mootummaa federaalaa irraa doolaara biliyoona 125 ol akka barbaadu himanii turan.
Amma yoonaatti namoonni 39 balaa Kanaan lubbuu isaanii dhabani jiru.
Pireezidantiin itti aanaa biyyatti Pence, hanga yoonaatti namootni 311,000 deeggarsaaf galmaahuu himuun, kongiransii keessaa gama lamaaniinuu deeggarsi akka taasifamu abdiin qaba jedhan.
Garuu deeggarsichi ariitii hammamiin miidhamtoota bira akka gahu hin himamne.
Pireezidant Tiraamp maallaqa dhuunfaa isaarraa doolaara miliyoona 1 gumaachuu isaa 'Waayit hawus' himee jira.
Lolaan erga gadi galee booda, xiyyeeffannoon lubbuu baraaruu irraa gara dandamachiisuutti geeddarameera. Jiraattonni garuu nageenya isaaniif jecha amma deebi'aa jedhamaniitti mana isaaniitti akka hin deebine jedhameera.
'Waayit Haawus' dursee akka beeksisetti manneen 100,000 ta'an balaa Kanaan miidhamaniiru.
Rooyitars Muummee nageenya manneenii biyyattii waabefachuun akka gabaasetti lammiileen 779,000 naannoo jiraatan gadi dhiisanii akka bahan yoo taasifamu, kanneen biroo 980,000 ta'an ammo fedhiin mana jireenyaa isaanii gadi dhiisanii jiru.
Eejansiin bulchiinsa balaa yeroo muddamaa kan mootumaa Federaalaa Ameerikaa, lubbuu namoota 3800 baraaruu isaa fi namoota 90,000 ammoo deeggarsaaf galmeesseera jedhe.
Dhiyyeessitoonni anniisaa lixa Teeksaas buufata boba'aa fi itti calalan fi sararawwan raabsituu cufanii waan turaniif gatiin boba'aa kutaalee Ameerikaa biroo keessatti ol ka'ee jira. Hedduun isaanii amma deebisanii banaa jiru garuu omisha idileetti deebi'uuf torbee muraasa fudhachuu mala.
Jiraattonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiranis rakkoon isaan mudataa jira.
Lubbuu baraartonni namni lubbuun jiru yookin kan du'es yoo jiraate mana manarra deemanii sakatta'iinsa gochaa jiru. Kunis hanga turban lamaa fudhachuu danda'a.
Bishaan lolaa baakteeriyaa fi wantoota fayyaa namaa faalan biro bo'oo balfaa keessaa haree baata waan ta'eef jiraattonni of-eggannoo cimaa akka godhan Ejansiin eegumsa naannoo biyyattii akeekkachiisee jira.
Rakkoon guddaan fayyaa jiraattotaaf sodaachisaa ta'e bishaan dhugaatii dha jedha eejansichi.
Manneen kumaatamni humna ibsaa malee jiru.
Hospitaalli baha magaalaa Hiwustan dhukkubsattoota bakka biraatti geessuf dirqamee jira.
Goodayyaa suuraa Buufata Keemikaalaa gubate, naannoo magaalaa Hiwustan
Buufatni Keemikaalaa tokko kamisa sababuma balaa kanaatiin yoo gubatu, abiddichi itti fufuu danda'a shakkiin jedhu wwan jiruuf jiraattonni naannoo sana gadi dhiisanii akka bahan taasifameera.
Haalli qilleensaa naannichaa tasgabbaa'aa jira, garuu gara haala qilleensaa baramaatti hin deebine.
Dubartiin Raashiyaa basaasummaan himatamte
Badhaasa warqee maraa Isaayyaas Afawarqiif
Finfinneedhaa Asmaraa daandii geessu
Akeekkachiisa Dr. Abiyyii hanga geerarsa Haacaaluu Hundeessaatti